Maalgashiga Deegaanka Kardemir ma joogsanayo sanadka 2020 | RayHaber | raillynews
[24 / 01 / 2020] Khidmada Tareenka Xawaaraha Sare ee Billaha ah	06 Ankara
[24 / 01 / 2020] Sheegasho ka timaadda BTS una wareejisaa tikitka TCDD Tikidhada loo gudbiyo waaxda Gaarka ah	06 Ankara
[24 / 01 / 2020] Shift2Rail Information Day Held	06 Ankara
[24 / 01 / 2020] Gawaarida ku-habboon-xoolaha ee Wadada Kocaeli	41 Kocaeli
[24 / 01 / 2020] Waa maxay Metrobus?	34 Istanbul
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia78 KarabukMaalgashiga Deegaanka Kardemir ma istaagin 2020
09 / 01 / 2020 78 Karabuk, Gobolka Central Anatolia, tareenka, GUUD, TURKEY
Kardemir kama goynayo xawaaraha maalgashiga deegaanka
Kardemir Karabük Iron iyo Iron Warshadaha iyo Ganacsiga Inc., Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha Mustafa Yolbulan, 2020 ayaa sidoo kale ku dhawaaqay in mudnaanta la siinayo maalgashiga deegaanka. Isagoo sheegay in maalgashiga deegaanka ee $ 50 milyan uu sii socdo, Yolbulan wuxuu yidhi, ylelikle Qaabkaan, waxaan ku guuleysan doonnaa mashruuca maalgashiga deegaanka ee wadarta guud $ 200 milyan waana fulin doonaa ballanqaadyadeena oo dhan.
Mustafa Yolbulan, Gudoomiyaha Gudiga Agaasimayaasha, oo martigaliyay martida ka socota xarumaha iyo ururada kala duwan ee shirkadayada, ayaa sidoo kale qiimeyn ku sameeyay maalgashiga deegaanka ee shirkada sanadka cusub. Isagoo sheegay in muhiimadoodu tahay inay noqdaan bay'adda sannadka 2019 sida sannadka 2020, Yolbulan wuxuu sheegay inay samayn doonaan maalgashi $ 50 milyan oo kale oo deegaanka ah marxaladda saddexaad iyo kan ugu dambeeya.
Isagoo xusay inay bilaabeen 2019 furitaanka maalgashiga deegaanka ee Gobolka Sinter kaas oo Murat Wasiirka Deegaanka iyo Magaalayntu kaqaybqaatay furitaanka maalgalinno dheeri ah oo deegaanka Deegaanka Blast Furnace Nidaamyada Wasaqda Hawada ee Deegaanka iyo Xarunta Daaweynta Biyaha Hawada ee Maalmihii ugu dambeeyay ee sanadka; Dhinaca maalgashiga, wuxuu yidhi:
Deegaanku waa waxa ugu muhiimsan uguna muhiimsan mudnaanta maamulkeena. Waxaan sameysanay maalgelinno aad u badan illaa iyo hadda. Waxaan ku jirnaa wareegii ugu dambeeyay. Muddadii ugu dambeysay, waxaan sidoo kale dhameystiri doonnaa dhowr mashruuc maalgashi oo deegaanka ah oo ka kooban 24 waxyaalood oo waaweyn iyo kuwo yaryar oo leh isugeyn maalgashi $ 50 milyan. Heerarka xaqiijinta ee maalgalintaan, oo aan bilownay qeybtii labaad ee 2019, ayaa ka sarreysa 90%. Ku dhawaad ​​bil kasta sanadkaan waxaan dhammeysan karnaa hal ama labo. Kuwaas waxaa ka mid ah nidaamyada xakamaynta qashinka, isku-dheellitirka garoonka, aagagga kaydadka xiran, nidaamyada kontaroolka bateriga korantada, nidaamyada aruurinta qashinka foornada, casriyeynta warshad daaweynta qashinka biyaha. Marka la eego baaxadda maalgalintan, waxaan ku guuleysan doonnaa 50 kun oo dhir iyo geedo leh muuqaal horumar leh iyo muuqaalka muuqaalka waxaanan shaaca ka qaadi doonaa Kardemir cagaaran. Warbixinnada horumarka maalgashi kasta si taxaddar leh ayaa loola socdaa
Kardemir kama yareeyo xawaaraha dhaqaalaha deegaanka
Wasiirka Investigated Kardemir ee Maalgashiga Deegaanka
Maalgashiyada tareenka kuma koobna
Maalgelinta Gaadiidka ee Kayseri Ha Jooji Xawaaraha
Maalgashiga Gaadiidka ee Boosaaso ha joojin xawaaraha
Kardemir 300 Million Investment Investment
Kardemir oo soo gabagabeynaya hindisada laba Maal-gashiga Cusub ee Cusub
Maalgashiga tareenka xawaaraha sare ee 2020 wuxuu gaari doonaa bilyan doolar USD
Maalgashiga Gaadiidka Izmir waxay Heshay saamiga Libaaxa ee Miisaaniyadda 2020
Maalgelinta deegaanka ee KARDEMİR
Dhismaha Daaweynta Biyaha Wasakhda Dhexe
Toos ula xiriir Mustafa
Nidaamyada Ururinta Wasakhda Wadada Qulqulaya Qaraxyada
Gawaarida ku-habboon-xoolaha ee Wadada Kocaeli